Usomabhizinisi waseNingizimu Afrika futhi oyiphayona le-telecoms e-Afrika - Afrikhepri Fondation
Uneminyaka engamashumi amathathu ubudala futhi umsebenzi wakhe usuvele umangalisa. Ekhanda leRekindle Learning, okuyisiqalo saseNingizimu Afrika esisebenza kwizisombululo zokufunda nge-e-ukufunda, uRapelang Rabana naye ungumsunguli weJeigo Communications, okuyinkampani enobuhlakani eye yathuthukisa ezinye zezicelo zokuqala ze-VoIP zeselula. Isoftware Yezokuxhumana ekuvumela ukuthi wenze amakholi wefoni, thumela ama-imeyili nemiyalezo mahhala nge-Intanethi. Owesifazane osemusha uqoqa umehluko. Ngonyaka owedlule wenza isicoco sikamagazini ohlonishwayo waseMelika, iForbes, waba phakathi kosomabhizinisi abancane abangamashumi amathathu abase-Afrika.
Emuva nje ekhishwa kwi-World Entrepreneurship Forum, uvele e-Oprah Power List 2012, kanye nobuntu obufana no-Aung San Suu Kyi, Lady Gaga noDalia Ziada. Kodwa ukuzinikezela kwangempela kwakhe kuhlale kukhonjwe yi-CNN njengenye ye "Marissa Mayers of Africa", ngokubhekisela kulowo ophethe isikhundla se-CEO ku-Yahoo! "Ngathinteka kakhulu uma kuqhathaniswa nokuqhathaniswa nezindiza ezinkulu ze-Silicon Valley," usho kanje.
Ngemuva kokuba ingane isetshenziswa phakathi kweGaborone, eBotswana, naseGoli, eNingizimu Afrika, uRapelang wafunda eKapa lapho athole khona isayensi ye-baccalaureate, ekhethekile kwi-computer yesayensi. Uma uhlelo lungelona i-forte yalo, likhetha ukuqhubeka ngale ndlela, ligcwele izithembiso zekusasa. "Ngokungafani nezimali, ukubalwa kwezimali noma ukumaketha, i-IT ingadala inani elingenalutho, nje ukucabanga okuncane. Ngithola lokho kuphefumula kakhulu. "Ukwakha ibhizinisi lakho kuyashesha. Akukhona ukuthi uvukela kakhulu noma ukhaliphile, uyavuma, kepha angenalo ukuzimela. Ukunamathela enkampanini yenkampani, echazwe ngesisekelo sezinto ezibaluleke kakhulu ezingezona ezakhe, akuthandi. "Bengingazizwa sengathi ngilahlekelwa ukulawulwa kwekusasa lami futhi kubonakala sengathi kuyingozi ngaphezu kokuqala ukuqala," etshela i-Ventures Africa.
Lo mbono uhluma emabhentshini eNyuvesi yaseKapa. Ngesikhathi beyizifundo, uRowelelang kanye nabalingani bayo ababili bekusasa, uWilter du Rooftop noLungisa Matshoba, babhekene nezindleko ezinkulu kakhulu zezingcingo. Umbuzo wombuzo: indlela yokwenza ucingo olufinyelelekayo olufinyeleleka kunani elikhulu kakhulu nokunciphisa ukuhlukaniswa kwedivayisi e-Afrika, ukudala ukungalingani? Ku-2005, nje ephothule ngezinga elithile e-computer yesayensi nokuphathwa, bahlangene no-Yeigo, okuthiwa ngeNavajo lisho "ngomzamo omkhulu". "Imicabango ehlakaniphile kakhulu ivela ekutheni uyakwazi ukuxazulula izinkinga zakho," kusho u-Rapelang. Umbono, lo wesifazane osemusha ulindele ukuqhuma kwama-mobiles e-Afrika kanye nokukhangwa kwabantu abasha kulezi zisekelo.
"Sasiyazi ukuthi i-intanethi ingashintsha kakhulu ikusasa lokukhulumisana ngokwezindleko, kodwa futhi nokuxhumana okuhlukahlukene. Wayengephutha. Kusukela ngaleso sikhathi, iNingizimu Afrika isibe yinye yamazwe ahamba phambili emkhakheni wezokuxhumana emakethe asanda kuvela. I-flagship kazwelonke, i-Yeigo brand uye yazakhela njenge-vanguard emhlabeni jikelele. "Lapho sithumele uhlelo lwethu lokuqala lwe-VoIP yeselula ku-2007, laphakathi kwezwe lokuqala. Le nkampani manje ingokwamaqembu aseSwitzerland eTelfree.
Ubuchwepheshe obusha, impendulo ezinselele ezinkulu ze-Afrika
Ngalolu phumelelo lokuqala, uRa Rapelang Rabana ufuna ukuqhubeka nokuhlanganyela ekuthuthukiseni izwekazi. "E-Afrika, kunezinkinga eziningi, futhi ngicabanga ukuthi ubuchwepheshe kanye ne-intanethi bangazixazulula. Ngenkathi ingxenye yabantu base-Afrika ingaphansi kweminyaka engu-25 ubudala, inquma ukubuka imfundo. Okubaluleke kakhulu ukuhlangabezana nenselele yendawo. "Inselelo ebhekene neAfrika yinto yokudala amathuba omsebenzi kubantu abasha. Kukhona isidingo esiphuthumayo sokusebenzisa ubuchwepheshe ukwandisa amakhono nokuqinisekisa ukuthi ubusha bobusha luyimpahla ezwenikazi. Umninimabhizinisi wabe eseqala uRekindle Learning, isiqalo esisebenza emisebenzini yomuntu siqu yokuqeqeshwa kwezemfundo nokufundisa. Isixazululo se-e-learning semidiya yeselula.
"I-Intanethi neselula kuyithuluzi elisebenzayo lokufukula abantu abasha. Banikezela ngokufinyelela olwazini olubucayi mayelana nokuhweba, ezolimo, ezempilo noma amathuba emisebenzi futhi banomthelela oqondile ekuguqukeni komphakathi wethu. "Ukuthola le miphumela empilweni yansuku zonke nokubuyela emibonweni emisha yikhona okugqugquzela iRapelang. Uma engazi okwamanje ukuthi kuzoba yini ukulwa kwakhe okulandelayo, uthi: uzohlala esebenza ukwenza imikhiqizo emisha. “Engikwazisa kakhulu wokwenza imibono yami yagcwaliseka. Inqubo enamandla nemilingo. Ngaphezu kokuqamba, iRapelang Rabana iyakhuthaza.
AmaMazama, onguchwepheshe wezilimi, izinkolo zase-Afrika kanye nomlando-mlando
U-Harriet Tubman, isishoshovu samalungelo abantu base-Afrika baseMelika nabesifazane